Abeneme abahlali basehostela | News24
LAST UPDATED: 2019-05-24, 21:39
Abeneme abahlali basehostela
PHOTO: lethiwe makhanyaIndunduma kadoti ochithwa ngemuva kwezindlu zabantu basehostela kanye nezindlu zangasese asebenqume ukuzakhela zona.
ABAHLALI basehostela laseMbali Unit 1 bakhala ngomasipala kanye nekhansela ngokungabanaki mayelana nezinkinga ababhekene nazo.
Phakathi kwezinkinga abakhala ngazo kubikwa ukungabikho kwezindlu zangasese kwezinye zezindlu, amapayipi amanzi avuzayo futhi nendawo yokulahlwa kukadoti eseyivele yavulwa ngemuva kwezindlu zabo nabakhala ngokuthi ibabulalela nocingo lwezingadi abazama ukuzakha.
La bahlali ngesikhathi bekhuluma ne-Echo bathe inkinga ebakhathaza kakhulu eyokungabikhona kwezindlu zangasese ezisesimweni kanye nokulahlwa kukadoti ngoba sebesaba ukuthi uzowela ezindlini zabo kwazise sekuyintaba enkulu.
Bathe le nkinga yaqala ngenyanga kaLwezi (November) ngonyaka owedlule.
“Kwaqala ngokuthi kulahle abantu abambalwa, sabakhuza, kodwa manje sekuvele kufike amaloli ezolahla yonke inhlobo kadoti ongayicabanga. Uke uzwe ngisho uthi uzihlalele endlini uzwe ngamatshe eseqengqeleka eqhamuka phezulu sekunamaloli echitha udoti.
“Kade saqala silubika lolu daba kwikhansela kodwa ayikho into eseyake yenzeka. Lihlezi lithembisa ukuthi lizokhuluma namaloli achitha lana ukuba ayeke le nto ayenzeyo kodwa alikakwenzi. Nathi sesize saphelelwa amandla okuloku sililandela silunxenxa ukuba likhuze lo mhlola njengomholi wendawo ngoba thina abantu abasilaleli,” kubeka omunye umhlali ongathandanga ukuba kudalulwe igama lakhe.
Laba bahlali bathi sebehlalele ovalweni njengoba sekuzoqala izimvula zasehlobo ngoba wonke udoti kanye nenhlabathi okuchithwa ngenhla kwezindlu zabo ungahle uwele phezu kwazo bese ziyadilika ngoba vele azikho sesimweni.
“Asikwazi ngisho ukuzilungisela thina lezi zindlu ngoba ngezikamasipala. Kusizani ukulungisa indlu okungathi uvuka ngakusasa bese uyaphucwa yona. Amanzi sesiphila ngokuthi sihleli sivale imitha ngoba amapayipi ayavuza kuvele kuxhaxhaze amanzi igceke lonke kuze kube manzi ngisho umgwaqo.
“Sikhuluma nawe nje kukhona abahlali abasebenzisa ihlathi ukuzikhulula ngoba bengenazo izindlu zangasese, ezinye zikhona kodwa azisebenzi zifile.
“Abanye sebeze bazakhela izindlu zangasese zomgodi ngoba sebekhathele ukugijimela ehlathini njalo uma befuna ukuzikhulula. Asazi ukuthi kungani umasipala ungayinaki le ndawo ngoba uthi lezi zindlu ngezabo. Akusikona ukuthi kuyasixaka ukuthi sizilungisele izinto uma zingalungile, into esiyifunayo nje ukuthi umasipala usitshele ukuthi singazithatha izindlu kube ngezethu ukuze sizokwazi ukuthi sizilungise,” kubeka leli lunga lomphakathi.
Laba bahlali bakhala nangokuthi uma bekhiphe udoti iloli likamasipala aliwuthathi kodwa kumele baze bawuwelise bayowubeka eduze kwemizi yabantu.
Ikhansela lakule ndawo uMnuz Caipus Ndawonde uthe akafanele engabe abantu bamaloli bayachitha kule ndawo.
“Sengikhulumile nabo ngaya ngisho nakubanikazi bezinkampani ngabatshela ukuthi abatshele abasebenzi babo ukuthi mabayeke le nto abayenzayo ngoba iphambene nomthetho. Lo doti abawulahla laphayana unamatshe amakhulu agcina esewela ezindlini zabantu lapha ehostela. Sesize saba nomuntu oqokiwe ukuba ahlezi ephonse iso kule ndawo ...
“Inkinga ekhona ukuthi babuye bantshontshe bachithe uma bebona ukuthi ababonwa umuntu ngoba nomuntu esimkhethile naye uyasebenza,” kubeka yena.
Okhulumela uMasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha akatholakala ukuphawula.
Makhanda's water woes stabilised, Gift of the Givers set for some cash back
One lucky winner in tonight's Daily Lotto draw 17 minutes ago Click here for the full list of lottery results